Digital Education Development Group
DED Edutech Group
(+95) 925 040 0209
The Need Of Digital Transformation In Education?
Extensive use of digital assets is changing the needs of modern learners. They are constantly looking for learning opportunities beyond the traditional classroom-based approach. To counter the situation schools and colleges need to develop alternative models of teaching for imparting education.
Scalability, Consistency, Quick Delivery
eLearning helps in creating and communicating new training, policies, concepts, and ideas. This ensures that all learners receive the same type of training with this learning mode. As compared to traditional classroom teaching method, this mode has relatively quick delivery cycles and reducing to 25%-60%.
အသေးစိတ် အာရုံစိုက်ခြင်း၊ စံနစ်တကျ စီမံထားခြင်း၊ သမာရိုးကျမဟုတ်ပဲ ဆန်းသစ်တီထွင်ခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု အပြည့်ရှိခြင်း၊ ဈေးနှုန်း သင့်တင့်စွာ သုံးစွဲနိုင်စေခြင်း၊ လိုအပ်ချက် အဆင်ပြေစေရန် လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
သင့်ကျောင်းကို Digital Classroom အဖြစ် ပြောင်းလဲရန် အခမဲ့ စမ်းသပ်သုံးစွဲနိုင်သောကြောင့် ချက်ခြင်းစတင်နိုင်ပါပြီ
မိမိဝယ်ယူထားသော Package ဖြင့်ပင် လိုအပ်သလို Storage တိုးမြင့်ရယူနိုင်သောကြောင့် Course Content များကို အကန့်အသတ်မရှိ ထည့်သွင်းသင်ကြားနိုင်ပါသည်
လှပခန့်ငြားသောပုံစံဖြင့် မည်သည့် Device ဖြင့်မဆို ဆီလျော်စွာ ဖော်ပြနိုင်ရန် အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ပေးထားသောကြောင့် ကိုယ်ပိုင် ဝဘ်ဆိုက်တခုအတွက် နောက်ထပ် ငွေကုန်ခံ စရာမလိုတော့ပါ
မြန်နှုန်းမြင့် Intel Zeon processor များကို အသုံးပြုထားပြီး လိုအပ်သည့်အချိန်တွင် အလိုအလျောက် သုံးစွဲနိုင်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သော ဆာဗာများကို အသုံးပြုထားပါသည်
Suitable Package Options
မိမိသင်တန်းကျောင်းနှင့် သင့်လျော်မည့် Package များကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျစားရိတ်ကို မိမိ လိုအပ်သလောက်သာ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်
ကျောင်းသားတစ်ဦးလျင် 900 ကျပ်ဝန်းကျင်ဖြင့် အတန်ဆုံးနှင့် အပြီးပြည့်စုံဆုံး Learning platform တစ်ခုကို ရရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်
ကိုယ်ပိုင် Logo နှင့် Mobile app တစ်ခုကို ဖန်တီးရယူနိုင်ပြီး မိမိ သင်တန်းကို Mobile Readiness ဖြစ်စေပြီး ကျောင်းသားများအတွက်လဲ လွယ်ကူစေပါသည်
ပြည်တွင်းရှိ ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များမှ အခက်အခဲများကို Live Chat, Screen Sharing စသည်ဖြင့် မြန်ဆန် ထိရောက်စွာ ကူညီနေသဖြင့် လုပ်ငန်းများ ကျန့်ကြာမှု မဖြစ်နိုင်ပါ
အသုံးပြုနည်းများကို မြန်မာဘာသာ Tutorial Video များဖြင့်ရရှိနိုင်သောကြောင့် လေ့လာသင်ယူရန် လွယ်ကူပြီး အမြန်ဆုံး စတင်နိုင်ပါသည်
LMS System တခုအတွက် လိုအပ်သော Features အစုံအလင်
Various Course Content
Video, Audio, Powerpoint, PDF အစရှိသဖြင့် Content မျိုးစုံဖြင့် သင်ခန်းစာများကို သင်ကြားနိုင်ခြင်း
ကျောင်းသားများအား Assignment ကို Deadline ဖြင့် ပေးနိုင်ခြင်း
Quiz အမျိုးအစား ဆယ်ခုကျော်ပါဝင်သဖြင့် ဘာသာရပ်မျိုးစုံအတွက် စာမေးပွဲစစ်ဆေးနိုင်ခြင်း
ရမှတ်များကို စာမေးပွဲ ဖြေပြီးပြီးချင်း ကျောင်းသားနှင့် ဆရာများမှ ချက်ခြင်း သိနိုင်ခြင်း
Digital အောင်လက်မှတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်ခြင်း
တဦးချင်း (သို့) အဖွဲ့လိုက် ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်း
ကျောင်းသားများ၏ ကျောင်းတက်မှတ်တမ်းအား ထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်း
အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဗွီဒီယိုဖြင့်လည်း Course ထဲမှ တိုက်ရိုက် သင်ကြားနိုင်ခြင်း
သင်ကြားမည့် ကျောင်းသားအရည်အတွက်၊ အသုံးပြုမည့် Course Content ပမာဏနှင့် သုံးစွဲလိုသည့် Features များအလိုက် ရွေးချယ်ပါ
ကျောင်းသား အရေအတွက် ၂၀၀ အောက်ရှိပြီး Video သင်ခန်းစာ အတန်အသင့်ရှိသော သင်တန်းကျောင်းများအတွက်
200 Users Unlimited Courses 1 Zoom Host 128 GB Storage Premium Theme Private Domain (Optional)
ကျောင်းသား အရေအတွက် ၅၀၀ ခန့် ရှိပြီး Video သင်ခန်းစာ များစွာအသုံးပြုသည့် သင်တန်းကျောင်းများအတွက်
500 Users Unlimited Courses2Zoom Hosts 256 GB Storage Premium Theme Private Domain Branded Mobile App (Optional)
ကျောင်းသား အရေအတွက် ၁၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး Premium Features များစွာအသုံးလိုသည့် သင်တန်းကျောင်းများအတွက်
1500 Users Unlimited Courses3Zoom Hosts 512 GB Storage Premium Theme Private Domain Branded Mobile App (Optional)
No.9/9 Tharaphi Street, West Saw Yan Paing, Ahlone Township Yangon, Myanmar, 11121 (+95) -9-250-400-209 sales@ded-edu.com
DED Group is Edutech product. DED Group is providing Learning Management Solution, E-learning Consulting, Online Class Solution, and Cloud Meeting Room since 2019. DED founders who have overadecade of teaching and working experience in IT industry.
Copyright © 2020 DED Group. All Rights Reserved.